Obhasikidi bokusika inhlama Izinzwa zobuciko - imibono yasekhaya nengadi
Obhasikidi bokusika inhlama
19.03.2014 Kuthunyelwe ngu: Sense Art
Imibono Yasekhaya, Ungadliwa, Izindlela zokupheka ze-Easter
Obhaskiti enhlama ebunjiwe kuyindlela ekhangayo nenhle yokusebenzisa amaqanda namaqanda ama-Easter. Umhlobiso omangalisayo wethebula lemikhosi, lapho ungakhonza khona amasaladi, ama-appetizer, izitsha ezahlukahlukene.
Ukweluka ibhasikidi kuyinqubo enobunzima obuthile, kodwa ilungele kakhulu iPhasika nokuhlela amaqanda ahlotshisiwe. Kunezindlela eziningi zokwenza, kepha ngokuyisisekelo konke kuncike ekwakhekeni komunye umkhumbi.
- Inhlama ongayikhetha - empeleni, amasoseji afaneleka kakhulu njengoba engafakiseli okuningi lapho kubhaka, kodwa lokhu kuyasebenza nakwezinye izinhlama zebhotela lebhotela kwezinye ku-pizzas.
- Isithako sokuthatheka esizokwakha ubhasikidi.
- Amafutha - noma imiphi imifino noma isilwane kufanelekile.
- Iqanda eliphukile nezipuni ezimbili amanzi - okusakazeka.
- I-foil ye-Aluminium noma iphepha lokubhaka, inqobo nje uma induku yenhlama ingekho ngqo epanini.
- Izinyo lwamazinyo ukuze uvikele ezinye izinhlobo ze-braid nesibambo, uma usunikeze eyodwa.
Khipha unxantathu wobukhulu obufisayo bese usika imichilo efanele. Guqula ipaneli evuselelayo ibheke phansi, ikhava nge-foil noma ngephepha njengoba kudingeka futhi ugcobe ngokucophelela wonke umhlaba. Imiphetho yenhlama kusisekelo esigcotshiswe ngamafutha kusetshenziswa indlela ekhethiwe, usike ngokucophelela imiphetho engadingeki ongayiphinda. Bopha ngokucindezela, futhi uma lokho akwanele, vikeleka ngamazinyo. Ungafaka futhi umthamo wobuciko ngokusika bobunjwa be-pasta (ngokwesibonelo, obunjwe ngamaqabunga). Lapho yonke pan isemboziwe, cindezela okuphezulu, ie. ukuze phansi kwangaphansi kube yilapho, faka iqanda elishayiwe bese ubeka endaweni engaphambi kwe-180 ° C kuya ku-220 ° C (ngokuya ngenhlama) kuhhavini. Bhaka kuze kube nsundu wegolide. Uma uthanda, hlela bese ubeka isibambo sebhasikidi ngokufana. Ivikelwa ngosizo lwamazinyo lapho ubhasikidi uphola. Lokhu kunzima kakhulu ngenhlama yesoda. Thola kusuka kwisisekelo, vumela ukuphola futhi usukulungele ukumangala kweholide. Uma ungahleleli ukusebenzela ngaphakathi kwamahora we-24 olandelayo, khona-ke ngemuva kokuphola, kufanele ubeke ibhasikidi emvilophini.
ukuhlela, Ubhasikidi wePhasika, Obhasikidi bePhasika, Obhasikidi bokusika inhlama, imibono, imibono yasekhaya, umbono ka-Ista, kubhasikidi, Obhasikidi bePhasika, obhasikidi wenhlama, obhasikidi bamaqanda, obhasikidi aboshiwe, Iresiphi ye-Easter, zokupheka obhasikidi, zokupheka, zokupheka inhlama, imibono yasekhaya, umklamo ongaphakathi, ifenisha, imibono yangaphakathi, design imibono, ikhaya lesimanjemanje, ukuhlobisa imibono, imibono yobuciko
Ukukhanyisa kuyingxenye ebalulekile yezangaphakathi. Kusuka ekukhetheni okulungile kwama-luminaires nabo ...
Ukuphakama nesitayela egumbini lokuhlala
Ngubani ongeke afune ukuhlala ekhaya elihle futhi elihlotshiswe kahle? Umklamo ongezansi ...
Zenzele isihlahla esincane sikaKhisimusi
Isihlahla sikaKhisimusi siyingxenye ebalulekile yokufanekisela uKhisimusi, kepha asihlali sinethuba ...
Amakhekhe Wamaqhwa Asebusika
Nayi eminye imibono yekhekhe leholide laseWinter Tale. Noma unga ...
Amaholide omculo ajabulisayo kakhulu ayeza. Izinsuku ezikhethekile lapho izinsuku ezinhle ...
Ukutshala amazambane emasakeni nasemabhodweni
Ukutshala amazambane emasakeni nasezimbizeni kuyindlela esebenzayo yokukhiqiza amazambane uqobo ...
Yenza ukuzimela kwe-reel engadini kuzimele
Uma une-reel enkulu ongayidingi futhi ungenayo i-echiyini eyinki oyidingayo, lena ene ...
Imibono Encane Yegumbi Lokuhlala
Imibono eyethulwe lapha ngeyokuklama igumbi lokuhlala elincanyana elizungeze isikwele se-17-20. Ethokomele nenhle ...